Amanyathelo eTango Dance - Umdaniso Umyalelo
Amanyathelo eTango Dance
Amanyathelo okudanisa eTango ashushu, ayathandeka, kwaye achanekile. Ikwayenye yemidaniso edumileyo ekuhlaleni. Ngaphandle kwesidima sayo, amanyathelo asisiseko omdaniso wetango kulula kakhulu ukuwaphula.
Ngaphambi kokuba udanise, isakhelo
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwi-tango sisakhelo, okanye indlela abadanisi ababambe ngayo imizimba yabo. Indawo yomdaniso 'ivaliwe,' oko kukuthi, ngesandla sokunene sokukhokela kwicala lesandla lasekhohlo lokulandela kunye nesandla sasekhohlo esolulelwe ecaleni, sibambe isandla sokunene sokulandela. Isandla sasekhohlo esilandelayo sibekwe phakathi ezantsi kwengalo ekhokelayo. Ngelixa oku kunika ukubonakala kwengalo yokuphumla, akukho bunzima bokwenyani kufuneka bubekwe kwingalo yokukhokela.
Imifanekiso yoMdaniso waseLatin American
Iinkcukacha ezimnandi ngoMdaniso
Imifanekiso yoMdaniso weBhola
Isikhokelo kunye nokulandela kufuneka kujonge ecaleni, ngasekhohlo nangasekunene, ngokwahlukeneyo, kunye neentsiba ngokuthe tye kwaye ukubuyela umva kancinci kwintloko yokulandela. Ngamaxesha athile kuyakubakho amanyathelo okudanisa i-tango afuna ukuba bathathe iintloko zabo ngeenxa zonke kwaye bajongane (amaxesha amaninzi ngokujonga okutsha) kodwa iintloko zabo mazisoloko zibuyele kwisakhelo sonke.
Isakhelo sigcinwe kumanqanaba amaninzi, kukuthambeka kuphela kwemizimba eguqukayo (umzekelo, kwifayile ye- sika ). Ngelixa oku kunokubonakala ngathi kwenza ukuba umdaniso ube ngqongqo kwabanye, enyanisweni uzinzo lwesakhelo somdaniso lwenza onke amanye amanyathelo omdaniso we-tango abe mahle ngakumbi.
Amanyathelo oMdaniso weTango: Esisiseko
Eyona ndlela ilula yokukhumbula inyathelo lokudanisa i-tango esisiseko kukucinga ngesicatshulwa esithi TA-NIN, kuba kukho iindawo ezintlanu ezisisiseko. Kwangelo xesha, amanyathelo anesingqi kunye nexesha elihamba ngolu hlobo lulandelayo: 'Cothisa… ukucotha… ukukhawuleza-ukukhawuleza-ukucotha ...'
Njengamaqela amaninzi emidaniso ye-ballroom, ukukhokela kunye nokulandela isipili omnye komnye amanyathelo asisiseko. Uninzi lwamanyathelo okudanisa e-tango anika inxenye nganye iindima zazo ezizakudlala. Isikhokelo sihlala siqala ngonyawo lwasekhohlo, landela ngasekunene, kwaye amanyathelo akhokelayo 'akhokela isithende' -oko kukuthi, isithende sonyawo sihla kuqala, hayi uzwane.
T (kancinci): amanyathelo akhokelayo aya phambili ngonyawo lwasekhohlo, ezi zibuko zilandela ngokubuyela umva ngasekunene.
A (kancinci): amanyathelo akhokelayo aya phambili ngonyawo lwasekunene, aboniswa kwakhona lilungelo lokulandela.
N (ngokukhawuleza): amanyathelo akhokelayo aya phambili kwakhona ngasekhohlo, inyathelo elincinci elincinci, ulungiselela ukuya kwicala lasekunene.
G (ngokukhawuleza): amanyathelo akhokelayo aya ngasekunene ngonyawo lwasekunene, kusetyenziswa indlela eyaziwa ngokuba 'kukuqokelela' unyawo. Oku kuthetha ukuba unyawo lwasekunene luza ecaleni lasekhohlo ngaphambi kokuya ngasekunene, kwaye alushukumi kwi-diagonal.
O (ucothayo): lelona nyathelo lihle kakhulu kwisiseko, oku kucotha kukutsala unyawo lwasekhohlo ngasekunene, ukulungele ukuqala esisiseko kwakhona. Ukulandela, kukujoyina unyawo lwasekunene ngasekhohlo ngokuhamba kancinci, ngabom.
Ezinye izinto ezilula zeTango
Elinye lamanyathelo omdaniso we-tango oqaqambileyo, kwaye ulula kakhulu yi-corte. Inokusetyenziswa xa isetyenziswa kumgangatho wokudanisa oxineneyo. Iqala, hayi ngokuya phambili, kodwa endaweni yokukhokela inyathelo umva ngonyawo lwasekhohlo, landela phambili ngasekunene. Oku kubeka bobabini abadanisi kwindawo encinci, kunye nomlenze wokunene wokukhokela kunye nokulandela ekhohlo kubambe nkqo.
Isitshixo se-corte silele kwizakhelo zomdaniso, nangona kunjalo, ezibanjwa ziqinile ngelixa iitorsos zijikeleza zisiya kwicala lasekhohlo kwaye yomibini imizimba ijijela kumlenze othe tye. Esi sikhundla sibanjelwe iminqwazi yokuqala emibini ecothayo (T… A…) ze emva koko bobabini abadanisi bazobe imilenze yabo egobile ukubuyela umva ukugqiba 'iNGO' ngendlela efanayo egqityiweyo ngayo esisiseko.
Zininzi ezinye iindlela zokudanisa kunye nokwahluka, njengokuhamba ngamehlo, ifeni evulekileyo, i-corte-to-fan, ukuphoswa kwe-apache, amagwegwe emilenze, ukubiza nje ezimbalwa. Eyona ndlela yokuzifunda kukuyalela abafundisi bomdaniso kwizitudiyo. Ngelixa amanye amanyathelo enokufundwa ngezixhobo ezikwi-intanethi kunye nevidiyo, akukho nto ingena endaweni katitshala wokwenene ophilayo, kwaye nangcono, bonwabile ngakumbi!
Umdaniso Umyalelo Iselula Phone Plans Ukhenketho Iibhalbhu Iincwadi Ezinqabileyo
imibuzo emihle engama-21 yokubuza umfana
Ngokubanzi, ingaba isiphumo sotywala siba njani kwinqanaba lokungcoliseka kolusu
Incinci isingeld bulldog vs english bulldog
ioyile yomnquma ikhuselekile kwiikati
simahla indawo yehip hop yokukhuphela umculo